बाल कथा : फुच्चे घर छाड्दैन ।। (माधव ‘सयपत्री’)
कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बस्ने रानाथारु महिलाले साउने डोला खेली तीज मनाउँदै ।।
बेल्डाँडी गाउँपालिका ४ बैबाहाकी शुशिला बुढाको घरमा पसेको गोहीको उद्धार ।।
जिल्लाभरीका कच्ची सडक बिग्रिदा कञ्चनपुरवासीलाई सास्ती, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य ।।
खोलामा भैँसी तार्ने क्रममा बगेर कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा एक महिलाको मृत्यु ।।
महाकालीमा पानीको बहाव बढ्यो, पुलमा अवागमन बन्द, सतर्क रहन आग्रह ।।
नेपाली बजारमा परम्परागत थारु लेहेंगाको क्रेज बढ्दो ।।
देवशक्ति उपभोक्ता सहकारी संस्थाको १०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।।
स्थानीय युवाहरुद्वारा पकेट खर्च जोगाई बैजनाथ धाम जेष्ठ नागरीक सेवा केन्द्रमा टेलिभिजन जडान ।।
स्थानीय तह कर्मचारी जिल्ला समन्वय सञ्जाल कञ्चनपुरको नयाँ कार्य समिति चयन ।।
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडको आयोजनामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर ।।
व्यञ्जना र अनुराग दिदीभाइ हुन् । उनीहरू घरबाट टाढा डेरामा बसेर पढ्छन् । गाउँमा हाइस्कुल नभएर त्यसो गर्नुपरेको हो ।
व्यञ्जना र अनुरागको घरमा एउटा फुच्चे बिरालो पनि थियो । उनीहरूको बाबा एउटा प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई विद्यालयको काममा बरोबर सदरमुकाम र अन्य ठाउँमा गइरहनु पथ्र्यो । त्यसैले उनीहरूका आमा एक्लै पर्नुहुन्थ्यो घरमा कहिलकाहीँ । त्यही फुच्चे बिरालो मात्र अनुरागकी आमाको साथी हुन्थ्यो ।
फुच्चे धेरैजसो अँगेनाको छेउमा बस्थ्यो । हुन त बिरालोको जातै चुलो रूङनेजस्तो हुन्छ । गर्मी मौसममा पनि आगोको राप छोड्दैन । साँच्चै बिरालोलाई त गर्मी पनि हुँदैन क्यारे !
व्यन्जना र अनुराग शुक्रबारको पढाइ सकेर साँझमा घर आइपुगेका थिए । फुच्चे धेरै खुसी भएको थियो । शुक्रबारको रात ऊ अनुरागसँग सुतेको थियो । नत्र, अरू रात एक्लै सुत्थ्यो फुच्चे । निदाउनै नपाई ‘घुरघुर’ गर्ने हुनाले आमालाई दिक्क लाग्थ्यो । सुत्नै दिँदैनथ्यो घुरेर । त्यसैले पनि आमाले फुच्चेलाई अर्कै कोठामा थुनेर ढोका लगाइदिनुहुन्थ्यो । ऊ डराई-डराई एक्लै सुत्थ्यो ।
शनिबार दिउँसोसम्म फुच्चे व्यञ्जना र अनुरागसँग लुटुपुटु गरी खेलेर बस्यो । उनीहरू जता जान्छन्, उतै गयो । घाँस काट्न गए पनि सँगै । मकैबारीमा बाँदर रूङ्न गए पनि सँगै । पानी लिन गए पनि, पत्कर सोहार्न गए पनि सँगै । एकछिन छोडेन फुच्चेले दिदीभाइलाई । व्यञ्जना त फुच्चेलाई अर्को सानो भाइजस्तो गर्थी । अनुराग पनि आफ्नै भाइलाई जस्तै माया गर्थ्यो ।
शनिबार बेलुकाखेरी व्यञ्जना र अनुराग एक हप्ताको लागि सामलतुमल बोकेर विद्यालय जान तयार भए । फुच्चे भित्रभित्रै रोयो । उसले मनमनै सोच्यो- ‘अब सात दिनसम्म कसरी एक्लै सुत्ने होला । दुष्ट बन ढाडे बिरालो आइरहन्छ । त्यसले मलाई खान पनि बेर लाउँदैन ।’
फुच्चे बिरालोले धेरै पीर गर्‍यो । आँखामा टिलपिल आँसु निकाल्यो । अनुराग र व्याञ्जना घरबाट हिँडे । ऊ परसम्म पुर्‍याउन आयो । छुट्ने बेलामा व्यञ्जनाले भनी-“फुच्चे ! तँ राम्ररी बस् है । हामी अर्को शुक्रबार त आइहाल्छौँ नि । पीर नगरी बस् ल । ढाडे बिरालोबाट जोगिनु नि ।”
अनुरागले फुच्चेलाई सुम्सुम्यायो र छाडिदियो । अनुराग र व्यञ्जना झोला बोकेर ओरालो लागे । बस भेटिने ठाउँसम्म पुग्न दुई घण्टा लाग्थ्यो । बस चढेपछि आधा घण्टामा उनीहरूको डेरामा पुगिन्थ्यो । फुच्चेलाई छोड्नु पर्दा उनीहरूको मन अमिलो भयो । फुच्चेले उनीहरूलाई देखुञ्जेलसम्म हेरिरहृयो ।
व्यञ्जना र अनुराग तलको डिल काटेर जङ्गलको बाटोमा पुगे । अब फुच्चेले उनीहरूलाई देखेन । मन कुडाउँदै फुच्चे घर फर्कियो । अर्को हप्ताको शुक्रबारको प्रतीक्षामा बस्यो फुच्चे ।
आइतबार भयो, सोमबार भयो । फुच्चे शुक्रबार आउने दिन गन्न थाल्यो- ‘आज मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार अब चारै दिन त हो नि । चार दिनपछि त आइहाल्छन् नि किन पीर गर्नु ?’
फुच्चेलाई वन ढाडेको ठूलो डर थियो । मध्यरातमा कता-कताबाट ‘ङ्याउँ-ङ्याउँ’ गरेको सुनिन्थ्यो । त्यतिबेला फुच्चे खाटमुनि लुकेर बस्थ्यो । वन ढाडे कोठाभरि फुच्चेलाई खोज्थ्यो, तर भेट्दैनथ्यो । व्यञ्जना र अनुरागकी आमाको कोठामा जाउँ भने ढोका बन्द गरेको हुन्थ्यो ।
एक हप्ता बित्न पो कति समय लाग्छ र ! शुक्रबार त आइहाल्यो । बिहानैदेखि फुच्चे अति खुसी थियो । उफ्री-उफ्री नाच्थ्यो । पर बारीको डिलमा गएर साथीहरू आउने बाटो हेथ्र्यो । घर फर्किन्थ्यो ।उता जान्थ्यो । यता जान्थ्यो । आमाको फरियामा लुटुपुटु गर्थ्यो । आमा कहिले माया गर्नुहुन्थ्यो । झर्को लागेपछि गाली गर्नुहुन्थ्यो । कान समातेर पर पुर्‍याइदिनु हुन्थ्यो । तर पनि फुच्चेलाई आफ्नै आमाजस्तै लाग्थ्यो । फेरि लुटपुटिन पुग्थ्यो ।
शुक्रबार बेलुका चार बजेदेखि फुच्चेले व्यञ्जना र अनुरागको बाटो हेरिरहृयो । उसले घरपछाडिको चुच्चेढुङ्गो छाड्दै छाडेन । पाँच बज्यो । उनीहरू आएनन् । छ बज्यो, आएनन्, आकाशमा बादल भरिँदै आयो । हावा चल्न थाल्यो । गड्याङगुडुङ गर्न थाल्यो । फुच्चेलाई अनुराग र व्यञ्जनाको पीर लाग्न थाल्यो । ‘उनीहरूसँग छाता छ कि छैन ? पानी ओइरियो भने के गर्छन् होला ? कसरी घर आउँछन् ?’
मुखमा छाता च्यापेर ऊ तलतिर झर्‍यो । तल वनको छेउमा पुग्यो । हेर्‍यो, कतै देखेन । हावा बेजोडसित चल्न थाल्यो । ठूला-ठूला थोपा पानी पर्न थाल्यो । असिना आउन पनि के बेर ! वैशाख-जेठको समय । असिना पर्ने त समय नै हो नि । फुच्चेले मुखमा एउटा छाता मात्र च्यापेको थियो । दुईटा च्याप्न सक्दैनथ्यो ।
फुच्चे डाँडैडाँडा, जङ्गलैजङ्गल तल बेँसीमा पुग्यो । हेर्‍यो-कतै देखेन । एकछिन गम खाएर बस्यो । हावाहुरी र मुसलधारे पानी पर्न सुरू भयो । फुच्चे त्यहाँ बस्न सकेन । एउटा धन्सारतिर लाग्यो । फुत्त ट्वाकलमा चढ्यो । हावाहुरी पानी छल्यो । तर उसका साथी आएनन् । हावाहुरी र पानी अलि मत्थर भयो । ऊ ट्वाकलबाट तल झर्‍यो । अँध्यारो-अँध्यारो भइसकेको थियो । मान्छे ठम्याउन पनि गाह्रो-गाह्रो भइसकेको थियो । फुच्चे धेरै डरायो । घर फर्किनलाई जङ्गलको बाटो, कसरी उकालो लाग्ने ? बाघको बिगबिगी थियो ।
व्यञ्जना र अनुराग नआएपछि ऊ रुँदै धन्सारकै परालमा घुसि्रयो । खानलाई केही थिएन । धन्सारको मुनितिर एकहल गोरु थिए । साँझमै घन्सारधनी, गोरुलाई पराल हालेर गाउँ उक्लिइसकेको थियो ।
Address:Kanchanpur, State No.7Nepal